तनाव कम गर्नका लागि भने यो पढ्नहोस् — News of The World
भनिन्छ, थोरै भन्दा धेरै साथी बनाए तनाब कम गर्न सकिन्छ । तर, सहि साथीहरू बनाउन भने आवश्यक हुन्छ । किनकी धेरै साथीहरू तनाब दिने खालका हुन्छन् त्यस्ता साथीबाट टाढै बस्दा फाइदा हुन्छ । अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको एक टिमले दिमागको केमिकल एन्डोर्फिन सम्बन्धी गरेको रिर्सचमा पत्ता लागेको छ की धेरै साथीहरू हुँदा एन्डोर्फिन पीडा कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
रिर्सचका क्रममा १८ देखि ३४ वर्ष उमेरका सय भन्दा बढी युवाहरूलाई सामाजिक सम्बन्ध बारे प्रश्न सोधिएको थियो । उनीहरूलाई प्रश्नमा सोधिएको थियो, कुन साथीसँग हप्ता या महिनामा एकपटक मात्र भेटघाट या फोन सम्पर्क भयो ? त्यसपछि उनीहरूमा पीडाको परीक्षण गरियो । परीक्षणमा पर्खालमा सहारामा लामो समयसम्म उभिइरहन लगाइयो । त्यसको नतिजामा जसको धेरै साथीहरू थिए उनीहरूमा पीडा कम भएको पाइयो भने कम साथी हुनेहरूमा पीडा बढी पाइयो ।
यो रिर्सचले जसले कम साथी बनाएको थियो उनीहरू तनावमा रहेको देखियो । अहिलेको डिजिटल दुनियाँमा जसरी सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता ज्यादा बढेको छ । त्यसकारण पनि साथीहरू भेटघाट गर्नु, घुम्न जानु, परिवारसँग बसेर कुरा गर्नु युवाहरूमा कम भइसकेको छ । उनीहरू दिनभरी र राती धेरैबेरसम्म पनि सामाजिक सञ्जालमा झुमिरहेको पाइन्छ । यसकारण पनि युवामा तनाव बढीरहेको रिर्सचमा जनाइएको छ ।
त्यसकारण राम्रा साथी बनाउनु, परिवार, नातेदार, छिमेकीसँग घुलमिल गर्नु, बालबालिकासँगै समय बिताउनु, हप्ताको एकदिन घुम्न जानु र स्वस्थ्यवद्र्धक तथा ज्ञानवद्र्धक पुस्तकहरू पढ्नु पनि तनाव कम गर्नु मानिन्छ ।
यसरी दिनुस् आफ्ना लागि समय
अधिकांश महिलाहरू जीवनभर अरुका लागि बाँच्दै आएका छन् । उनीहरू कहिले छोरीको रुपमा, कहिले बहिनीको रुपमा, कहिले श्रीमतीको रुपमा, कहिले आमाको रुपमा यात फेरि अफिसको लागि समय दिएर समय बिताएका हुन्छन् । तर, घरबाहिर पनि संसार छ भन्ने धेरै महिलाले महशुस नै गर्न पाएका हुँदैनन् । सधै अरुका लागि त बाँच्यौ तर, आउनुहोस् जानौँ आफ्ना लागि बाँच्न के गर्नु पर्दोरहेछ त ?
घुम्न निस्कनुहोस् – एकपटक समय निकालेर घरबाहिर एक्लै घुम्न जानुहोस् । यो नसोच्नुहोस् की तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेर । घरबाट निस्किनुस् र एक्लै घुम्नुहोस् । त्यतिबेला तपाईलाई थाहा हुनेछ की एक्लै घुम्नुको मजा तथा आफ्ना लागि बाँच्नुको मजा कस्तो हुँदो रहेछ ।
एक्लै डिनरमा जानुहोस्– कहिलेकाँही एक्लै डिनरमा जानुहोस् । यसबाट केही समय तपाई आफ्ना लागि बिताउनु हुन्छ । यसले तपाईमा भएको आत्मविश्वास पनि बढाउँछ ।
एक्लै सिनेमा हेर्न जानुहोस्– कहिलेकाँही एक्लै आफूले चाहेको फिल्म हेर्न जानुहोस् । यसले तपाईलाई केही समय कामको तनावबाट मुक्ति दिन्छ । यसले तपाईलाई सबैभन्दा बढी आराम दिलाउँछ ।
केही सिक्नुहोस्– कुनै भाषाको क्लास, डान्स, वक्तित्वकला लगायतका कक्षा पनि लिन सक्नुहुन्छ । त्यसले तपाईलाई जीवनमा अघि बढ्न आत्मविश्वास थपिदिन्छ । त्यसको अर्को फाइदा क्लासमा तपाईले तपाईजस्तै अरु साथीसँग सम्बन्ध बढाउन सक्नुहुन्छ ।
अफिसको समयमा यस्तो गर्नुहोस्- दिनभरी अफिस या घरमा दिनहुँ गरिने कामका कारण तपाईलाई फुर्सद मिल्दैन । त्यस्तो बेला यदि कुनै पनि समय तपाईले निकाल्न सक्नुभयो भने एक कप चिया, आफ्नो मनपर्ने किताब तथा कुनै हल्का संगीत सुन्दै आफूमा आफैलाई हराउने गर्नुहोस् । त्यसले पनि तपाईलाई केही समय आफ्नो लागि दिए भन्ने आभाष गराउँछ ।